Vanced Manager အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော YouTube ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗားရှင်းဖြစ်သော Youtube Vanced ကို ထည့်သွင်းရန်အတွက် အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပရိုဂရမ်၏အဓိကအားသာချက်များ- ကြော်ငြာများမရှိခြင်းနှင့် နောက်ခံဖွင့်ခြင်း။
Vanced Manager မှတစ်ဆင့် YouTube Vanced ကို ကလစ်နှစ်ချက်ဖြင့် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ကြော်ငြာပိတ်ခြင်း - ကြော်ငြာမပါဘဲ ဗီဒီယိုများကို အခမဲ့ကြည့်ရှုပါ။ ကြော်ငြာယူနစ်များကို ပင်မစာမျက်နှာ၊ ရှာဖွေမှုမှ၊ ဗီဒီယိုများမှ ဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ။
နောက်ခံဖွင့်ခြင်း - ဖန်သားပြင်ကို ပိတ်ထားသည့်တိုင် ဗီဒီယိုများကို နားထောင်ပါ။ အခြားအရာများလုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် သင်အကြိုက်ဆုံးဂီတ သို့မဟုတ် ပေါ့တ်ကာစ်များကို သင်နားထောင်နိုင်သည်။
ပုံမှာပြထားတဲ့ပုံ- Picture-in-Picture (PiP) မုဒ်သည် အခြားအပလီကေးရှင်းကို သင်အသုံးပြုနေချိန်တွင် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ဗီဒီယိုအကွက်ငယ်တစ်ခုကို ပြသသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် Android 8.0 (Oreo) နှင့်အထက် လိုအပ်သည်။
ပွတ်ဆွဲခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှု - မျက်နှာပြင်အနှံ့ သင့်လက်ချောင်းကို ပွတ်ဆွဲရုံဖြင့် အသံအတိုးအကျယ်နှင့် တောက်ပမှုကို ချိန်ညှိပါ။
အပြင်အဆင်များ - နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင်၊ Dark+White နှင့် Black+White အပြင်အဆင်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများအကြား ဆန္ဒရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းရောင်နှင့် အပြာရောင် ဒီဇိုင်းဟောင်းများကို မကြာမီ ထုတ်ဝေနိုင်ရန် ကြိုးစားသွားပါမည်။
VP9 Codec - VP9 codec သည် ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးပုံကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စပွန်ဆာလုပ်ကွက် - SponsorBlock ၏ကျေးဇူးကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် ဗီဒီယိုရှိ ဘလော့ဂါ၏စပွန်ဆာများ၊ မိတ်ဆက်များနှင့် အဆုံးသတ်များမှ ကြော်ငြာများကို ကျော်နိုင်သည်။
Vanced Manager ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဒေါင်းလုဒ်မလုပ်မီ ဗားရှင်းဟောင်းကို ဖယ်ရှားပါ။
Vanced Manager (2.6.2) ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
ဘီတာ (2.6.9) ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
Android တွင် Vanced Manager ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
အဆင့် ၁။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ Vanced Manager ၏တရားဝင် apk ဖိုင်။ ၎င်းနှင့်အတူ၊ သင်သည် Vanced အပလီကေးရှင်းအားလုံးကို ထည့်သွင်း၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ကာ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
အဆင့် ၂ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော ဖိုင်ကို နှိပ်ပြီး စနစ်က ၎င်းကို တောင်းဆိုလာပါက အမည်မသိရင်းမြစ်များမှ ထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါ။
အဆင့် ၃ Wanted Manager ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် ၄ MicroG ဘေးရှိ "Install" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင့် google အကောင့်သို့ အကောင့်ဝင်ရန် add-on လိုအပ်ပါသည်။
အဆင့် ၅ Youtube လိုဂိုဘေးရှိ "Install" ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၆ Light + Dark သို့မဟုတ် Light + Black ကဲ့သို့သော အပြင်အဆင်ကို ရွေးပါ။
အဆင့် ၇ ဘာသာစကားကို ရွေးပါ။
အဆင့် ၈ တပ်ဆင်မှုကို အပြီးသတ်ပါ။
အဆင့် ၉ ပရိုဂရမ်ကို run ပါ။
အဆင့် ၁၀ သင့် Google အကောင့်သို့ အကောင့်ဝင်ပါ။
အဆင့် ၄ Manager ကိုဖွင့်ပြီး Magisk ဘေးရှိ "Install" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၅ ယခု သင်သည် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Youtube သို့မဟုတ် Youtube Music ကို ပုံမှန်အတိုင်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
မှတ်စု: 1. အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာပါက YouTube တရားဝင်အက်ပ်ကို ပိတ်ပါ။ 2. MIUI အသုံးပြုသူများ လိုအပ်ပါသည်။ MIUI ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကို ပိတ်ပါ။ ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ developer ရွေးချယ်မှုများတွင်။
3 "Vanced Manager — скачать бесплатно Vanced Manager на Андроид" ဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်များ
18:16 တွင် 17/02/2022
11:43 တွင် 21/02/2022
ဤဗားရှင်းသည် ကျွန်ုပ်အား အမှားအယွင်းတစ်ခု ဖြစ်စေသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤဗားရှင်းရှိ ဗားရှင်းဟောင်းများကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
22:19 တွင် 06/03/2022
Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။ ပြန်စာ ပယ်ဖျက်ပါ
ဗမာစာ	Русский English Français Español Deutsch বাংলা Čeština Dansk Ελληνικά Suomi हिन्दी Italiano 日本語 Magyar Bahasa Indonesia 한국어 नेपाली தமிழ் ไทย Tiếng Việt Türkçe